लीड्स क्याप्चर गर्न WordPress र गुरुत्व फार्महरू प्रयोग गर्दै Martech Zone
प्रयोग गर्दै WordPress तपाईंको सामग्री व्यवस्थापन प्रणाली आजकल धेरै धेरै सामान्य छ। यी साइटहरू मध्ये धेरै सुन्दर छन् तर इनबाउन्ड मार्केटिंग लीड क्याप्चरको लागि कुनै रणनीतिको अभाव छ। कम्पनीहरूले ह्वाइटपेपरहरू, केस स्टडीहरू प्रकाशित गर्दछन् र केसहरू उत्कृष्ट विवरणमा प्रयोग गर्छन् उनीहरूलाई डाउनलोड गर्नेहरूका सम्पर्क जानकारी लिने बिना।
डाउनलोडको साथ वेब साइट विकास गर्ने जुन दर्ता फारमहरू मार्फत प्राप्त गर्न सकिन्छ राम्रो इनबाउन्ड मार्केटिंग रणनीति हो। सम्पर्क जानकारी क्याप्चर गरेर वा सायद चलिरहेको ईमेल संचारहरूको लागि अप्ट-इन द्वारा - तपाईंले प्रयोगकर्तालाई उनीहरूको सम्पर्क जानकारीको लागि बदलामा उनीहरूलाई सम्पर्क गर्न सकिन्छ भनेर सूचित गरिरहनु भएको छ।
यदि तपाइँ वर्डप्रेस प्रयोग गर्नुहुन्न भने, बहु प्लेटफर्महरू वा स्थानहरूमा फारामहरू प्रयोग गर्न चाहनुहुन्छ, वा धेरै उन्नत आवश्यकताहरू छन् भने, मेरो सिफारिश सँधै हुन्छ फार्मस्ट्याक। यो प्रयोग गर्न सजिलो छ, सेटअप, र इम्बेड तपाइँको साइट को पर्वाह नगरी। यदि तपाईं WordPress प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ भने, गुरुत्वाकर्षण फारम धेरै लोकप्रिय प्लगइन बनाएको छ जुन डाटा क्याप्चरको लागि राम्रोसँग काम गर्दछ।
गुरुत्वाकर्षण फार्म एक अविश्वसनीय ड्र्याग र ड्रप फार्म प्लगइन हो जुन विशेष रूपमा वर्डप्रेसको लागि विकसित गरिएको हो। यो राम्रोसँग विकसित भएको छ, धेरै टन एड-अन र इन्टिग्रेसनहरू छन्, र - सबै भन्दा उत्तम - यसले WordPress भित्रका सबै प्रस्तुतिहरू बचत गर्दछ। त्यहाँ अन्य धेरै फारम उपकरणहरू मात्र ईमेल ठेगाना वा बाह्य साइटमा डाटा धक्का दिन्छन्। यदि त्यहाँ त्यो डाटा को पारित संग एक मुद्दा छ, तपाईं संग कुनै पनि प्रकारको जगेडा छैन।
गुरुत्वाकर्षण फार्म सुविधाहरू समावेश गर्दछ
प्रयोग गर्न सजिलो, शक्तिशाली फारामहरू - छिटो निर्माण र सहज बनाउँनुहोस् सहज ज्ञान भिजुअल फार्म सम्पादकको प्रयोग गरी तपाइँको WordPress फारामहरू। तपाईको फाँटहरू छनौट गर्नुहोस्, तपाईका विकल्पहरू कन्फिगर गर्नुहोस्, र सजिलैसँग ईम्बेड गरिएको फर्ममा तपाईंको वर्डप्रेस पावर साइटमा अंतर्निहित उपकरणहरू प्रयोग गरेर।
+०+ फाराम क्षेत्रहरू प्रयोग गर्न तयार - गुरुत्व फार्म फार्म फिल्ड इनपुट को एक विस्तृत विविधता ले आउँछ आफ्नो औंलाहरु मा र हामीलाई विश्वास, तपाइँको औंलाहरु धन्यवाद छ। फारम सम्पादक प्रयोग गर्न सजिलो प्रयोग गरी कुन क्षेत्रहरू तपाईले प्रयोग गर्न चाहानुहुन्छ छान्नुहोस् र छनौट गर्नुहोस्।
ससर्त तर्क - ससर्त तर्कले तपाईंलाई फारामहरू, सेक्सनहरू, पृष्ठहरू, वा सबमिट बटन पनि प्रयोगकर्ता छनौटहरूको आधारमा देखाउन वा लुकाउन कन्फिगर गर्न अनुमति दिन्छ। यसले तपाइँलाई सजिलैसँग नियन्त्रण गर्न मद्दत पुर्‍याउँछ जुन तपाइँको प्रयोगकर्तालाई तपाइँको वर्डप्रेस द्वारा संचालित साइटमा प्रदान गर्न भनिएको छ र फारमलाई विशेष रूपमा उनीहरूको आवश्यकता अनुसार दर्जी गर्नुहोस्।
इमेल सूचनाहरू - तपाईंको साइटबाट उत्पन्न भएका सबै सीसाको शीर्षमा राख्न प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ? ग्रेभिटी फारामहरूसँग ईमेल स्वत: प्रतिक्रियाकर्ताहरू छन् तपाईंलाई जानकारीमा राख्न प्रत्येक पटक फारम बुझाइएको बेलामा।
फाइल अपलोड - तपाईंको प्रयोगकर्ताहरूले कागजातहरू सबमिट गर्न आवश्यक छ? फोटोहरू? त्यो सजिलो छ। केवल तपाईंको फारममा फाईल अपलोड क्षेत्रहरू थप्नुहोस् र तपाईंको सर्वरमा फाइलहरू बचत गर्नुहोस्।
बचत गर्नुहोस् र जारी राख्नुहोस् - त्यसोभए तपाईंले विस्तृत फाराम बनाउनु भयो र यसलाई केहि समय लिन सक्दछ। गुरुत्वाकर्षण फारामहरूको साथ, तपाईं आफ्ना प्रयोगकर्ताहरूलाई आंशिक रूपमा पूर्ण भएको फारम बचत गर्न र पछि यसलाई फिर्ता फिर्ता गर्न अनुमति दिन सक्नुहुन्छ।
गणना - गुरुत्व फार्म तपाईको दैनिक फार्म प्लगइन हैन ... यो एक गणित विज्ड पनि हो। सबमिट फिल्ड मानहरूमा आधारित उन्नत गणना गर्नुहोस् र तपाईंको साथीहरू आश्चर्यचकित गर्नुहोस्।
एकीकरण - Mailchimp, PayPal, Stripe, Highrise, Freshbooks, Dropbox, Zapier र यति धेरै! विभिन्न प्रकारका सेवाहरू र अनुप्रयोगहरूसँग तपाईंको फारमहरू एकीकृत गर्नुहोस्।
गुरुत्वाकर्षण फारम प्रत्येक WordPress साइटका लागि आवाश्यक हुन्छ। हामी दुबै सम्बद्ध हौं र एक आजीवन विकास इजाजतपत्रको मालिक हौं!
गुरुत्वाकर्षण फारामहरू डाउनलोड गर्नुहोस्
टैग: कब्जा लिड्सफारामगुरुत्वाकर्षण रूपहरूइनबाउन्ड मार्केटिङजोड्नुWordPressWordPress फारमहरूWordPress प्लगइन
धेरै सहयोगी भिडियो, डगलस। आउँदै गरेको सामान राख्नुहोस्।
राम्रो टुट, सरल र यसले यो GravityForms नयाँलाई मेरो पहिलो फारम उठाउन र चलाउन मद्दत गर्‍यो। http://bit.ly/4ANvzN
के तपाइँ गहन बहस मन पराउनुहुन्छ? यसले केही पाठकहरूका लागि "असफलता" (अर्थात थप बटनहरू) को स्तर थप्छ जस्तो देखिन्छ... र यो टिप्पणीहरू प्राप्त गर्न पर्याप्त गाह्रो छ!
अगस्ट 22, 2011 बेलुका 7:24 बजे
गुरुत्वाकर्षण फारम र WordPress एक महान संयोजन हो। के तपाइँसँग डाउनलोड फाइलमा वास्तविक URL लुकाउन र एक पटक मात्र प्रयोग गर्न सकिने फरक डाउनलोड URL प्रस्तुत गर्ने कुनै सुझाव छ? के bit.ly जस्तै केहि एक पटक डाउनलोड लिङ्क सिर्जना गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ? म खरिद गरिएका गीतहरू वा अन्य फाइलहरू डाउनलोड गर्न प्रयोगहरूको लागि सोच्दै छु जुन तपाईं अलि बढी सुरक्षा चाहनुहुन्छ?
अगस्ट 22, 2011 बेलुका 7:51 बजे
म वास्तवमा वास्तविक URL लुकाउन सक्दिन - मैले लिङ्कलाई प्रतिक्रिया इमेलमा राखें त्यसैले तिनीहरूसँग मान्य इमेल ठेगाना हुन आवश्यक छ। म पक्का छु, केही सानो कोडको साथ, तपाईंले उनीहरूलाई एन्क्रिप्टेड इमेल ठेगानामा ह्यासको साथ लिङ्क प्रदान गर्न सक्नुहुन्छ - त्यसपछि यदि तिनीहरूले यसलाई क्लिक गरे भने, तपाईंले यो पहिले नै एक पटक डाउनलोड गरिएको थियो कि भनेर हेर्न सक्नुहुन्छ र अरू कसैलाई यसलाई डाउनलोड गर्नबाट रोक्न सक्नुहुन्छ।
अगस्ट 22, 2011 बेलुका 8:10 बजे
यसलाई डाउनलोड गरिँदैछ भनेर नजर राख्नु र लिङ्क हटाउन वा परिवर्तन गर्नु प्रभावकारी हुनेछैन। तुरुन्तै उत्पन्न गर्न र अस्पष्ट लिङ्क र प्रयोगकर्तासँग साझेदारी गर्नको लागि उपकरणको URL सर्टनर प्रकार प्रयोग गर्न सक्षम हुनु एक धेरै राम्रो थप हुनेछ।
अगस्ट 22, 2011 बेलुका 8:37 बजे
तपाईंले ठ्याक्कै भन्नु भयो जुन मैले भर्खर गरें। त्यो 'केही सानो कोडको साथ' भाग हो।
अप्रिल 30, 2013 मा 7: 14 एएम
एउटा फाइल प्रबन्धक थप्नुहोस् र सरल डाउनलोड क्षेत्रहरू सिर्जना गर्नुहोस् - थप url छैन
मई 10, 2015 मा 12: 13 एएम
के कसैले पनि न्यूजलेटरहरूको लागि इमेल ठेगानाहरू खिच्न ड्रिप-जस्तै पपअप / पपओभर बक्सको साथ गुरुत्वाकर्षण फारम + मेल चिम्प एकीकरण प्रयोग गर्दैन? मैले याद गरें कि यो साइटले वास्तवमा ड्रिप प्रयोग गर्दछ र लागत बिना ड्रिप जस्तो देखिने तरिका खोज्दै थियो।
हामीले गुरुत्वाकर्षण फारमहरू प्रयोग गर्छौं र Mailchimp लागू गरेका छौं तर तपाईंले के खोजिरहनु भएको देखेका छैनौं। म सहमत छु - त्यो सरल उपकरण हुनु राम्रो हुनेछ! OptinMonster धेरै खराब छैन र उच्च कन्फिगर गर्न सकिन्छ।